Uju - Inja ehlanganisiwe-yohlobo lwejazi elikhanyayo uMessina
Uthando olumsulwa kanye namehlo amabili adlulisela uthando.
Inja enothando kakhulu ngokufana nokuziphatha komuntu, Miele isiphambano phakathi kwe Beagle nenja yokuzingela, evela ijazi elinsundu shiny.
Uju: umngani omnandi onemilenze emine othandwe njengendodana
Miele unesisa esikhulu inja yokuzala, weqa phakathi kwe Beagle futhi a inja yokuzingela, mhlawumbe a I-Italian hound. Simnandi futhi sinokuthula, sesiphenduke umthombo uthando olumsulwa womndeni wesintu owamukele manje eminyakeni engu-3 edlule ku Messina. Kwakhe ingubo ungumbala onsundu onsundu, umthunzi igama lawo owazalelwa kulo.
UMiele yinja yokuzingela enamehlo abantu
Miele Unomlingiswa ogcinwe yedwa futhi onamahloni futhi kumthatha isikhashana ukujwayela abanye nginga kunabantu. Lapho umuzwa usutholakele, noma kunjalo, ngokushesha uyadlala. Unokucacisa okumangazayo futhi uthathe onkulunkulu cishe nokuziphatha komuntu: kusukela ekwamukelweni kuye ekuqabuleni, kusukela ekulaleni phansi kombhede wabazali bakhe abangabantu ukuba seduze nabo etafuleni ngaphandle kokuthinta lutho. Ngokusobala abantu bakhe bahlala bemvuza ngokumnika umklomelo wakhe I-cookie encane ekhethiwe.
Abalingani bemidlalo nama-burgoies ngefomethi ye-canine
Miele kungukuthi umoba umama, onamathele kakhulu kubazali bakhe. UValeria uthola imfundo nesiyalo enkosini yakhe, kuyilapho uGiovanni enenkosi enamandla isidlali namapranks. Uyadlala futhi unempilo aze afike ekukhathaleni, umdlalo wakhe awuthandayo ibhola le-orange, alithandayo kubo bonke abanye anabo.
Njengazo zonke izingane, uMiele udinga ukutlama okuningi nokunakwa
Miele kuyiqiniso futhi kufanelekile indodana enemilenze emine, uphathwa futhi uthandwa kanjalo ngumndeni wakhe awunika uthando nokungenakuqhathaniswa nsuku zonke. Usaba ukukhala nemisindo emikhulu futhi evala izindlebe. Uzonda ngokuphelele ukuba yedwa: kumenza azizwe kabi kakhulu ngisho namahora ambalwa. Igcwalisa izinsuku ngenjabulo enkulu kangangokuba kunzima ukuyichaza ngamagama. Okuhle okunikezayo nokwamukelayo ngokushintshanisa lo sweet inja, ayinakuchazwa nganoma iyiphi enye indlela ngaphandle kwenkulumo ethi: Uthando Olumsulwa.
Umakhala ekhukhwini: 392 7042842